Profile Company - Shenzhen Bowei Tech Co., Ltd.
808 Diode Laser Timaha raritaanka
Avgiftning Foot Spa
Machine wajiga Haydradii
Buste Saunada infrared
Magaadle hoggaamiyo Therapy
Maqaarka Analyzer Machine
Xiinka maqaarka Scrubber
Shenzhen Bowei Tech Co., Ltd. waa quruxda & daryeelka caafimaadka qeybiyaha qalab ah ee Shiinaha, kaas oo isku daraa cilmi baarista iyo horumarinta, wax soo saarka, iibinta, iyo adeega aftersale wada. Tan iyo markii ay aasaaska ee shirkadda our, oo dhan of our hawlgalka ayaa u ekaadaan caadiga ah nidaamka tayada ISO9001.
Dhab ahaan baan u qotomiyey nidaam damaanad tayada dhamaystiran oo loo dhisay shabakad iibka iyo afterales adeeg dhameystiran suuqa maxaliga ah. Si tocater ah horumarinta suuqa iyo dalabka macaamiisha, waxaan marnaba joojin dadaal si ay u siiyaan wax soo saarka ugu fiican iyo adeegga iibinta ka dib.
"Bixinta wax soo saarka oo tayo sare leh iyo adeegga ka xoogbadan," waa siyaasadda tayada our. "Ku qanaca macmiil ah waa Heerka adeegga" waa marketingstrategy. Ruuxa ku raad tayo wanaagsan leh iyo adeegga wanaagsan ee ka dhigaysa waxyaabaha our caan ah ma ahan oo keliya in Shiinaha, laakiin sidoo kale in Southeast Asia, ku-Mid East, Europe, Australia iyo Waqooyiga America, lahaanshaha sumcad sare ka mid ah macaamiisheena ka adduunka oo dhan
RM902, ShangMei Times, NO.57 LongGuan RD, Long Hua coal Shenzhen, Shiinaha, 518000
Home Isticmaalka Cold wajiga cawo , infrared EMS Machine , maqaarka la adkeeyay ee Radio Wave Machine Frequency , udugga oo cawo iyo wajiga , maqaarka Ipl Daaweynta , Light Shr Ipl Timaha saarista Machine ,